Kofi capsules inofanirwa kudzokororwazve mune mamwe midziyo | Green Renewables
Munharaunda yanhasi tinogadzira huwandu husingaverengeke hwemarara pakupera kwezuva. Kwete chete muhuwandu, asi zvakasiyana. Tikajaira kurasa marara uye kujairwazve, senge mapurasitiki, kurongedza, mapepa uye makadhibhokisi, girazi uye organic, hatione kuti kune mamwe marudzi emarara uye kuti chimwe chinhu chinofanira kuitwa nawo.
Mune ino kesi, isu tichataura nezvazvo kofi capsule vakasara. Kupesana nezvinofungwa nemunhu, macapsule ekofi haafanire kudururwa mumudziyo weyero, asi pane nzira dzakagadzirwa nemakambani kuunganidza nekurapa mhando yemarara iyi Iwe unoda kuziva chii chinoitwa nekofi macapsule?
1 Kafi masara
Kofi capsules haifungidzirwe kurongedza zvinoenderana ne iwo Mutemo weKupakisha uye Waste. Izvi zvinodaro nekuti iyo capsule haina kuoneka kubva pachigadzirwa chainacho. Nekuda kweichi chikonzero, haipinde muketani yekuchengetera zvakare cheni semabhodhoro, magaba kana zvidhinha zvakaiswa mumudziyo weyero asi zvinofanirwa kuitwa nedzimwe nzira.
Kuti varape tsvina iyi, makambani akaita seNespresso naDolce Gusto vakaita zvirongwa zvekurapa tsvina iyi nekuigadzirisazve. Yakachena mapoinzi ekudzokorora macofi kofi akaiswa kubva muna Kukadzi 2011 muBarcelona. MuSpain yese, kune akaparadzirwa kutenderera Makumi zana nemakumi mashanu ekuunganidzwa kweDolce Gusto uye mazana manomwe nemakumi manomwe eNespresso. Iwo makambani anoti anokwanisa kudzokorora 75% yemacapsule avanotengesa, asi anotadza kusimbisa vhoriyamu iyo vatengi vanonyatsodzosera mumidziyo.
Ichi chiyero izano rakanaka, asi kushomeka kweruzivo rwekuti macapsule ane yavo yekudzokorora poindi inenge yakajairika. Mushure mekudzidza kwakaitwa neSangano revatengi veSpain (OCU), zvakazozivikanwa kuti chete 18% yevatengi vanotenga aya macapsule anoadzokorora iwo munzvimbo dzadzo dzinoenderana. Zvisinei, 73% vakabvuma kuti vakavarasa.
Makambani anoparadzanisa epurasitiki zvinhu kana aluminium, zvichiteerana, kubva kofi. Iwo ekutanga anoshandiswa zvakare muzvirimwa zvine hunyanzvi mune izvi zvinhu. Plastiki inoshandiswa, semuenzaniso, kugadzirwa kwemidziyo yemumaguta senge mabhenji kana mabhasiketi emarara. Kofi inogadziriswazve se kompositi yezvirimwa.
Naizvozvo, zvinodikanwa kuti uwedzere ruzivo urwu kuvanhu vazhinji kuitira kuti zvishandiso izvi zvishandiswe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Kofi capsules inofanirwa kudzokororwa mumidziyo yakati
European Commission inopa zano idzva rekudzikisa mweya
Solar greenhouses anokwanisa kugadzira simba uye kurima